中国BLN5560筋膜枪外转子刷မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်စက်ရုံ| Staba万博体育存了钱怎么用 - 172manbetx
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းအား: 37 w
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: 24V DC.
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်： 3111 rpm.
ဖော်ပြချက် ဝန်မရှိပါ အများဆုံးထိရောက်မှု အများဆုံး输出ပါဝါ
မြန်နှုန်း(RPM): 3,720. 3,116 1978年
လက်ရှိ（က）： 0.36 2.1 ၆၄。
扭矩（nm）：00.12 0.38
输出စွမ်းအင်(W):037 80
ဗို့အား(V): 24 24 24